သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တိုးတက်မှုပါဝါသော့ဖွင့် - သတင်း Rule
ကျွန်တော်တစ်ဦးအခြို့သောအရာဝတ္ထုကိုကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာ, ဥပမာတစ်ပန်းချီကျွန်တော်တို့အထဲတွင်ဘာတန်ဖိုးထားနိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်, အဘယျအခြယ်သသည်နှင့်အဘယ်အရာပန်းချီကားရုံတခုလက်မကွာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာကနေပါလျှင်ထိုသို့နှင့်အတူဝင်. ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုအနည်းငယ်ထပ်မံယူဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်, Weill တပြင်လုံးကိုအနုပညာအလုပ်ကိုတစ်ဦးရှင်းလင်းရူပါရုံကိုရှိ.
ကျနော်တို့ပြောင်းလဲမှုအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြီးမှငါတို့အသက်တာ၌တစ်ဦးပွိုင့်ငါတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်မှုအာဏာကိုသော့ဖွင့်ကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုအချက်အလက်များ၏တစ်ခုလုံးစည်းရောက်ရှိ. ထို့နောက်အချိန်အထိ, အရာတစ်ခုခုကိုလက်ျာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှာခေါင်းအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုစိုက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကမြင်donít. အရာအားလုံးအဆိုးဆုံးတယ်သောအခါငါတို့သည်ငါတို့၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်မှုအာဏာကိုဖော်ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတာဟာစဉ်းစားတစ်ခုတည်းသောအချိန်ဖြစ်ပါသည်. ဥပမာအားဖားနိယာမကိုယူ
ပွက်ပွက်ဆူနေသောရေအိုးတလုံးထဲမှာဖားတစ်ဦးကအားမရကြိုးစားပါ. ဘာဖြစ်တာလဲ? သူက twerps! သူကပိတ်ထားခုန်! အဘယ်ကြောင့်? သူသည်မိမိပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရုတ်တရက်အပြောင်းအလဲရေရဲ့အပူချိန်ကိုသည်းခံဖို့မတတ်နိုင်သောကြောင့်,. ထိုအခါဖား B ကိုကြိုးစားကြည့်ပါ: တစ်ဦးလုကာပူနွေးတဲ့ရေထဲမှာသူ့ကိုနေရာ, ထို့နောက်အပေါ်ဓာတ်ငွေ့မီးဖိုဖွင့်. ရေကိုတစ်ဦးမတယောကြွက်ကြွက်ဆူသောအချက်ရောက်ရှိသေးပါဘူးစောင့်ဆိုင်း. ဖားက B ထို့နောက်hereîအတွက်ìOohÖနည်းနည်းပူနွေးitísထင်.
လူတွေကယေဘုယျအားဖြင့်ဖားက B ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏. ယနေ့တွင်, အန်နာတဲ့ Carl သူမ၏မုန်းထင်. နက်ဖြန်, ပက်ထရစ်သူမ၏အထိလမ်းလျှောက်သူကသူမ၏မုန်းသူမ၏သို့ပြောသည်. အန်နာကသူ့ကိုမိတ်ဆွေများကပြောပါတယ်သူမ၏ဘာတူညီနှင့်doesnítစိတ်ကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာ. နောက်တစ်နေ့, သူမကင်နှင့်ယောဟန်ကိုလည်းသူမ၏စက်ဆုပ်ကြောင်းလေ့လာသိရှိ. အန္နတစ်ခုလုံးကိုအသိုင်းအဝိုင်းသူမ၏မုန်းသည်အထိအရေးပါမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်တိုးတက်မှုများအတွက်လိုအပ်ချက်တခါမှာနားလည်သဘောပေါက်doesnít.
ကျွန်တော်တို့နာကျင်မှုခံစားရသောအခါအကြှနျုပျတို့သသင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာသင်ယူ. အမှုအရာကြမ်းတမ်းနှင့်ခက်ခဲတဲ့ရလာတဲ့အခါကျနော်တို့နောက်ဆုံးသတိပေးလက္ခဏာနှင့်အချက်ပြမြင်. ကျနော်တို့အစားအစာကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပါတယ်သဘောပေါက်ကြပါလာတဲ့အခါ? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်ရှပ်အင်္ကျီအဘယ်သူအားမျှကျွန်တော်တို့ကို fit မယ်လို့သောအခါ,. ကျွန်တော်တို့သကြားလုံးနှင့်ချောကလက်စားခြင်းရပ်တန့်ကြပါလာတဲ့အခါ? ကျွန်တော်တို့ရဲ့အံသွားအားလုံးချွတ်ရောက်နေပါတယ်လာတဲ့အခါ. ကျနော်တို့ဆေးလိပ်ကိုရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းသဘောပေါက်ကြပါလာတဲ့အခါ? ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆုတ်မကောင်းတဲ့ပြီသောအခါ,. ကြှနျုပျတို့ဆုတောငျးနှင့်အကူအညီတောငျးဘူးဘယ်အချိန်မှာ? ကျွန်တော်တို့weíreမနက်ဖြန်သေဆုံး့သဘောပေါက်လာတဲ့အခါ.
လောကဓာတ်လုံးကို crashing နှင့်ပြိုကွဲသောအခါကျွန်တော်တို့အများစုကအစဉ်အဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်မှုအာဏာကိုဖော်ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတာဟာအကြောင်းသင်ယူတစ်ခုတည်းသောအချိန်ဖြစ်ပါသည်. ထိုသို့ပြောင်းလဲမှုမှမလှယျကူသောကွောငျ့ကျနော်တို့ထင်နှင့်ဤလမ်းခံစားရ. ကျွန်တော်လစျြလြူရှုသောအခါမူကားအပြောင်းအလဲကိုပိုပြီးနာကျင်ဖြစ်လာ.
ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်, ကတူသို့မဟုတ်မုန်း. တစ်အချက်သို့မဟုတ်အခြားမှာ, ငါတို့ရှိသမျှသည်ဘဝ n အတွက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့အချိုးအကွေ့တွေ့ကြုံခံစားသွားကြသည်နှင့်ကမ္ဘာဒါကပြောပါတယ်သောကွောငျ့ကြှနျုပျတို့အားလုံးနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်မှုအာဏာကိုမသော့ဖွင့်သွားကြသည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေများကျွန်တော်တို့ကိုချင်နေကြတဲ့ကြသည်မဟုတ်သောကြောင့်,, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကောငျးကြိုးအတှကျသူ့ရဲ့သဘောပေါက်သောကြောင့်,.
မင်္ဂလာကလူပဲပြောင်းလဲမှုကိုလက်ခံdonít, သူတို့ကလက်ခံ. အခုတော့, သငျသညျမိမိကိုယ်ကိုတိုးတက်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းသဘောပေါက်ရှေ့တော်၌ကြီးမားတဲ့အပူခံစားရဖို့ရှိသည်donít. ငါamî့လမ်းìitsကြောင့်အတွေး၏လှောင်အိမ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတက်ဖော်ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတာဟာသင့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တိုးတက်မှုအာဏာကိုနည်းလမ်းသော့ဖွင့်. ဒါဟာကြောက်ရွံပြောင်းလဲမှုကိုတှနျးလှနျသောလူများအတွက်ထိုကဲ့သို့သောဆင်းရဲသားဆင်ခြေဆင်လက်ဖြစ်ပါသည်. ကျွန်တော်တို့အများစုဟာကွန်ပျူတာများကဲ့သို့အကြှနျုပျတို့၏စိတျ program.
Jen အကြိမ်ကြိမ်သူမကလူအုပ်စုများပတ်ပတ်လည်ဖြစ်ဖို့ GUTS ရှိdoesnítကလူတိုင်းကိုပြောပြ. သူမသည်သူမ၏ mom, ကြားသိ, သူမ၏အဖေ, သူမ၏အစ်မ, her teacher tell the same things about her to other people. Over the years, that is what Jen believes. She believes its her story. And what happens? Every timeagreat crowd would troop over their house, in school, and in the community ñ she tends to step back, shy away and lock herself up inaroom. Jen didnít only believed in her story, she lived it.
Jen has to realize that she is not what she is in her story. Instead of having her story post around her face for everyone to remember, she has to have the spirit and show people ìI am an important person and I should be treated accordingly!ငါ
← 2015: ယခုနှစ်လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာတစ်ခု gimmick ဖြစ်ခြင်းရပ်တန် လိမ့်မည် 2016 virtual reality ဂိမ်းကစားခြင်းကိုချွတ်ယူယခုနှစ်ဖြစ်? →